Nankatoavin’ny HCC ny lalàn’ny sata afrikanina | NewsMada
Nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny lalàna lah. 2015-034 nandanian’i Madagasikara ny Sata afrikanina momba ny demokrasia sy ny fifidianana ary ny fitantanam-pitondrana. Araka ny fanapahan-kevitra lah.04-HCC D1, ny 4 janoary 2016, ary navoakany ny 3 febroary lasa teo.
Nankatoavin’ireo filoham-panjakana sy lehiben’ny governemanta eo anivon’ny Vondrona Afrikanina (UA) tamin’ny fivoriana an-tampony faha-8 tany Addis-Abeba, ny 30 janoary 2007, ny Sata afrikanina momba ny demokrasia sy ny fifidianana ary ny fitantanam-pitondrana. Nanomboka nanankery izany, ny 15 febroary 2012, ary nanao aonia azy i Madagasikara, ny 31 janoary 2014.
Mila fampiharana ny tanjona amin’io sata io
Anisan’ny tanjona amin’io sata io, ohatra, ny fampiroboroboana ny soatoavina sy ny foto-kevitra manaren-tany momba ny demokrasia sy ny zon’olombelona; ny fanamafisana ny fanjakana tan-dalàna amin’ny fanajana ny lalàmpanorenana sy ny lamina amin’izany amin’ny fitantanana politika ny firenena; ny fampiharana ny lalàna amin’ny fifidianana mangarahara, malalaka, marina…
Araka izany, takina amin’ny fanjakana, ohatra, ny fampiharana ny zon’olombelona sy ny foto-kevi-dehibe amin’ny demokrasia, mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana sy ny fanjakana tan-dalàna ny fahazoana sy fampiasana ny fahefam-panjakana, ny fanatontosana fifidianana mangarahara, malalaka, ary marina. Eo koa ny fisaraham-pahefana, ny fiarovana ny fahaleovantenan’ny fitsarana, ny miralenta amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana sy amin’ny sehatra tsy miankina…